#Ezobuhle: Ukudla okunempilo kungayigwema injubaba | Isolezwe
#Ezobuhle: Ukudla okunempilo kungayigwema injubaba
intandokazi / 7 November 2018, 5:53pm / BONGIWE ZUMA
NOMA owesifazane angamuhle kanjani kodwa kuhlala kunezinto ezimkhathazayo emoyni, njengokuqothuka kwezinwele.
Lokhu akwenzeki nje kubantu abafaka imithi yokulula izinwele, abaxhuma izinwele zokufakelwa, kodwa inkinga yokuqothukelwa izinwele ibhekene neningi labesifazane.
Sekwaze kwaba negama elijwayelekile lokuteketisa izinwele eziqothukayo, njengoba zibizwa ngenjibaba, noma injibs, kwezinye izindawo. Izinto zokugeza nokugcoba ekhanda zihlala zikhangiswa, futhi zigagulwa ngamagama kodwa kukancane zibuyisa izinwele, okuze kuholele ekutheni abantu bagunde.
Ongoti bezokudla bashumayeza ivangeli elihlukile njengoba bekhuthaza bonke abantu ukuthi badle ukudla okufanele nokunezakhamzimba ezibalulekile ezingasiza umuntu angaqothuki.
UNkk Ella Mthethwa we-Ellagance Wellness Health Boutique, uveze ukuthi inkinga yokuqothuka kwezinwele kubantu abaningi iqala ngaphakathi emzimbeni womuntu.
Lokhu kuqothuka uthi kungadalwa izinto eziningi, njengokushoda kwezakhamzimba egazini ezitholakala ngokudla nokumele zilekelele ukuhluma kwezinwele.
“Ukudla nezinto umuntu azigcobayo kumele nakanjani kuhambisane, izithelo nemifino kudlala enkulu indima. Imvamisa abantu abanaki ukuthi badla hlobo luni lokudla nokwenza bagcine begxile kuhlobo olulodwa. Uma kukhona izakhamzimba ezishodayo egazini, azizofinyelela lapho kumele kukhule khona izinwele.
Kunanoma yimiphi imikhiqizo neyesikhumba, kumele uqale ngokuzilungisa ngaphakathi wenze i-detox, bese udla ngendlela izinto ezinama-vitamin, amaprotein, calcium, iron ungakushiyi,” kusho uNkk Mthethwa.
Uthe bakhona nowoyela bemvelo abantu abangabasebenzisela izinto ezahlukene emakhaya. I-marula, olive oil, caster oil, coconut oil nabanye abahloliwe. Mayelana nokudla, uthe akudingi ukuthi kuze kube okubizayo, kodwa nokutholakala ekhaya engadini kubalulekile ngoba kunezakhamzimba zemvelo, akuthakiwe.
Ezinye zezinhlobo zokudla ezitholakala kalula nongaqinisa kuzo:
Ukwatapeya: Okuhle ngawo ukuthi udleka kalula nezinhlobo ezahlukene zokudla. Okumangazayo ukuthi uqukethe nama-vitamin abalulekile njengo-E noB ohambisana namafutha adingekayo.
Uzokusiza ukuqinisa izinwele zakho zingaphuki kalula, zihlale zinempilo futhi nesikhumba sekhanda siphefumula kahle. Uyakwazi nokuwuxuba nezinye izinto wenze umxovo wezinwele.
Ubhatata: Nawo udleka ngezindlela ezingefani futhi noma uluhlaza ungakwazi ukuchitha isizungu ngawo kodwa ube wenza umsebenzi omkhulu. Ugabe ngo-vitamin A. Uzokusiza ukuthi izinwele zakho zingaqhumi noma ziqothuke kalula.
Inhlanzi: Izinhlobo ezahlukene zezinhlanzi zasolwandle ziyasiza nazo. Iningi lazo liqukethe ama-protein, zinc, iron, calcium, omega fatty acids kanjalo novitamin C. Konke lokhu kubalulekile emzimbeni womuntu ngoba kudingwa yigazi, isikhumba kanjalo nezinwele.
Iqanda: Linama-protein ne-keratin equkethe uhlobo oluphambili lwama-protein asiza esikhumbeni, izinwele nezinsipho.
Uyakwazi nokulihlanganisa nokotapheya ukugcobe ekhanda, uconsisele i-olive oil. Ngelinye ilanga ungalisebenzisa nobhanana noma noju.